गर्मीमा आँखाको ख्याल कसरी गर्ने ? | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ५, २०७८ chat_bubble_outline0
गर्मी यामका स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिन्छन् । तापमान बढेसँगै वायुमण्डलमा प्रदूषण पनि बढेको छ । तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी मौसममा आँखामा विभिन्न किसिमका समस्या देखिने गर्छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित मुख्य मुख्य सहरहरू अव्यवस्थित हुँदा फोहोर मैला बढ्दा आँखामा प्रत्यक्ष रूपमा सङ्क्रमण बढ्ने आँखा रोग विशेषज्ञ बताउँछन् । आँखामा सङ्क्रमण हुँदा समयमै ख्याल गरिएन भने आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्छ । गर्मी मौसममा आँखा चिलाउने, पाक्ने, पोल्ने, रातो हुने, सुख्खा हुने, बिझाउने आदि समस्या देखिन सक्ने आँखा रोग विशेषज्ञ डा. कमल खड्का बताउँछन् ।